About us - Fuzhou Bontai Diamond Izixhobo Co., Ltd.
Fuzhou Bontai Diamond Izixhobo Co., Ltd yasekwa ngo-2010, Bontai iye mveliso yayo leyo ngokukodwa ukuthengisa, ukuphuhlisa kunye nokwenza zonke iintlobo zezixhobo diamond. Sinoluhlu olubanzi lwezixhobo zokuguba kunye neepolishi zenkqubo yeplishi yomgangatho, kubandakanya izihlangu zedayimani yokuguba, iivili zekomityi yokusila yedayimane, iidiski zokugaya idayimane kunye nezixhobo zePCD. Ukusebenza ukusila iintlobo ezahlukeneyo zekhonkrithi, iterrazzo, imigangatho yamatye kunye neminye imigangatho yokwakha.
Njengoko kubonisiwe kumzobo, yiprojekthi kwifektri yamathaya eNanjing, inendawo epheleleyo eyi-130,000m². I-BonTai ayinakho ukubonelela ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu, kodwa ikwanokwenza ubuchwephesha obutsha ukusombulula naziphi na iingxaki xa usila kwaye upolisha kwimigangatho eyahlukeneyo.
Ngolwazi lwemveliso yobuchwephesha kunye nenkqubo elungileyo yeenkonzo kwiqela leBonTai, asinakusombulula kuphela ezona mveliso zibalaseleyo nezithandekayo, kodwa sisombulule iingxaki zobuchwephesha. Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi.
Inkampani yethu yaziwa ngomgangatho wayo ophakamileyo kwaye ibonakaliswa ngokuqina okugqwesileyo, uzinzo kunye nokuqaqamba okuphezulu kwindawo "BTD" yezixhobo zokugaya idayimane kunye neepinki zokucoca idayimane, ezamkelwa ngokubanzi kwimarike yasekhaya naphesheya kwezilwandle. Kuthunyelwe eMpuma naseNtshona Yurophu, eMelika, eOstreliya, eAsia nakuMbindi Mpuma nakwimakethi yelizwe jikelele.
Sisoloko sibambelela kwifilosofi yeshishini "yeemveliso ezintle, ukugaya okuhle, kunye nokugqwesa kwenkonzo enzulu". Ukuthembela kukuhlelwa kwemveliso ngocoselelo, umgangatho wemveliso ezinzileyo, inkqubo yolawulo efanelekileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo yabathengi, iye yamkelwa kwaye yathenjwa luluntu lwabathengi.
Siyaqhubeka nokuhlangabezana neemfuno ezizodwa zabathengi bethu, iimveliso ezenziwe ngokukodwa ezahlukileyo, ukuphucula ixabiso leemveliso zethu, kwaye ngokuqhubekayo senza ixabiso ngakumbi kubathengi bethu. Zama ukuba umthengisi wesona sixhobo sidayimani.